Umaki: ungayikhuthaza kanjani i-webinar | Martech Zone
Umaka: ungayikhuthaza kanjani i-webinar
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 20, i-2013 NgoMgqibelo, ngoMeyi 7, 2016 UJenn Lisak Golding
Ngo-2013, ama-62% we-B2B asebenzise ama-webinars ukukhuthaza imikhiqizo yawo, ephuma ku-42% ngonyaka owedlule. Ngokusobala, ama-webinar athola ukuthandwa futhi asebenza njengethuluzi lokuhola eliholayo, hhayi nje ithuluzi lokumaketha. Kungani kufanele uwafake kuhlelo lwakho lokumaketha kanye nesabelomali sakho? Ngoba ama-webinars abalwa njengefomethi yokuqukethwe ephezulu ekushayeleni imikhondo efanelekile. Muva nje, bengisebenza nekhasimende kanye nesisombululo se-webinar esizinikezele, i-ReadyTalk, kokunye okuqukethwe kwe-webinar ehamba phambili